ဖုန်းဖော်ဆောင်ရေးရပ်တန့်ပါရန် BlackBerry ကို ! - သတင်း Rule
ဖုန်းဖော်ဆောင်ရေးရပ်တန့်ပါရန် BlackBerry ကို !
ကနေဒါကုမ္ပဏီဆိုင်းမိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများအ touchscreen များအတွက်ရွေးချယ်အဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရုန်းကန်ရှိခြင်း software ကိုမှအာရုံစူးစိုက်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဖုန်းများအောင်ရပ်တန့်ဖို့နဲ့ BlackBerry” Angela Monaghan ကရေးသားခဲ့သည်, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 28 စက်တင်ဘာလအပေါ်အဆိုပါဂါးဒီးယန်းများအတွက် 2016 15.05 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
BlackBerry ကိုအပြီး၎င်း၏ဖုန်းကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိတ်ပစ်ဖြစ်ပါတယ် 14 ဟန်းဆက်အောင်၏အနှစ်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်တခါပညာရှင်များအဘို့ရှေးခယျြမှု၏ဖုန်းခဲ့ကြ, အပြောင်းအရွေ့အပေါ်အီးမေးလ်များကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး, ဒါပေမဲ့ BlackBerry ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူများကိုပိုမို touchscreen များအတွက်ရွေးချယ်အဖြစ်ပြိုင်ဘက် Apple နှင့် Samsung မှယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူတက်ထားရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်.
ကနေဒါကုမ္ပဏီယခုဆော့ဖ်ဝဲကိုအောင်အာရုံစိုက်နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများအားဟာ့ဒ်ဝဲများထုတ်လုပ် outsource လိမ့်မည်.
ယောဟနျသ Chen က, ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, ကပြောပါတယ်: "ကျနော်တို့က software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေသည်, လုံခြုံရေးနှင့် applications များအပါအဝင်. အဆိုပါကုမ္ပဏီအားလုံးပြည်တွင်းရေးဟာ့ဒ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို function ကို outsource လိမ့်မည်. ဒီကျွန်တော်တို့ကိုမြို့တော်လိုအပ်ချက်များကိုလျှော့ချရန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမြို့တော်အပေါ်ပြန်လာတိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ "
Chen ကအရှိမရှိသူစက်တင်ဘာလများကသိမည်ဟုယခုနှစ်အစောပိုင်းကပြောပါတယ် ဆုံးရှုံးမှု-အောင်ဟန်းဆက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အမြတ်အစွန်းဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ခဲ့သည်.
ယောဟနျသ Jackson က, IDC မှမှာလေ့လာဆန်းစစ်, ထုတ်ကုန်အောင်ရပ်တန့်ဖို့နဲ့ BlackBerry ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် "လုံးဝကိုပညာရှိများနှင့်ဖြစ်နိုင်နှောင်း" ဟုဆိုသည်. သူကဆက်ပြောသည်: အာရုံဖြစ်သင့်ရှိရာနဲ့ဆက်စပ် "ဆော့ဝဲဝင်ငွေနဲ့ margin ပရိုဖိုင်းဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ယခုဖြစ်နိုင်တယ်။ "
CMC စျေးကွက်များအ BlackBerry ကိုဟန်းဆက်၏အသေခံခြင်းတစ်ချိန်ကကမ္ဘာ့အဓိကစမတ်ဖုန်းရောင်းချသူတဦးဟုယူဆနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုခေတ်အဆုံးအမှတ်အသားကပြောပါတယ်. CMC စက်တင်ဘာလအတွက်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးမှာသူကပြောပါတယ် 2013, ရှိခဲ့ပါတယ် 85 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်း BlackBerry ကို subscribers, ဒါပေမယ့်မတ်လအားဖြင့် 2016 အရေအတွက်ကျဆင်းသွားခဲ့ 23 သန်းက Android နဲ့ iOS ကိုပလက်ဖောင်းမှထွက်ပျောက်ဆုံးအဖြစ်.
Related: iPhone ကို7ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: ဘက်ထရီပင်တစ်နေ့လျှင်ကြာရှည်မပါဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းတစ်ဦးမှဖုန်းဖွစျနိုငျ?
Colin Cieszynski, CMC မှာအကြီးအကဲဈေးကွက်လေ့လာဆန်းစစ်သူ, ကပြောပါတယ်: "ဒီနေ့ကုမ္ပဏီအတွက် BlackBerry ကိုများအတွက်ကြီးမားသောအကူးအပြောင်းနှင့်ခေတ်အဆုံးခြေတစ်လှမ်း. အဆိုပါကုမ္ပဏီဆက်သွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးမှုအပြည့်အဝဟာသူ့ရဲ့အာရုံပြောင်းသွားဖို့စီစဉ်ထား, မြို့တော်လိုအပ်ချက်များကိုလျှော့ချခြင်း, margin တွေတိုးမြှင့်။ "
ဒါကြောင့်ဒုတိယသုံးလပတ်များအတွက်ပိုကောင်းမျှော်မှန်းထားတာထက်-င်ငွေကြေညာခဲ့သည်နှင့်အသုညမှငါးဆင့်ရှယ်ယာများ၏အကွာအဝေးမှအပြည့်အဝနှစ်အတွက်ဝင်ငွေရရှိမှုမျှော်လင့်တက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးနောက် BlackBerry ကိုရှယ်ယာ Pre-ဈေးကွက်ကုန်သွယ်ထ, 15 ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးမှုလက်ရှိဈေးကွက်မျှော်လင့်နဲ့နှိုင်းယှဉ်.
Cieszynski ကုန်သည်များင်ငွေအတွက်အခက်အခဲကြောင့်ပယ် shrugging ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်, $ 352m မှာမျှော်မှန်းထားသည်ထက်နိမ့်ခဲ့ကြရာ. "ကုန်သည်ကြီးများကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ 89% သူတို့ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တစ်နှစ်ကျော်ဝင်ငွေတိုးတက်မှုနှုန်း,"ဟုသူကဆိုသည်.
BlackBerry ကိုလည်းသူ့ရဲ့အကြီးအကဲဘဏ္ဍာရေးအရာရှိတစ်ဦးကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, ဂျိမ်း Yersh, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်အောက်တိုဘာလကုန်မှာကုမ္ပဏီထွက်ခွာခဲ့သည်. သူကစတီဗင် Capelli ဖြင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်, ယခင် Sybase အလုပ်အမှုဆောင်.
26136	4 Angela Monaghan, အပိုဒ်, BlackBerry ကို, စီးပွားရေး, computing, အဓိကအပိုင်း, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, စမတ်ဖုန်း, Software များ, နည်းပညာ, ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း
← MacOS Sierra: သင်က Apple ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာသစ် Software များအကြောင်းသိထားရန်လိုအပ်ထိပ်တန်းငါးခုသောအရာမြား ဘယ် Keyboard ကိုနှင့်မောက်ငါ့ PC အတွက် Buy သင့်သ? →